Masmak, Masmak किले - रियाद
मध्य पूर्व सउदी अरब रियाद
ठेगाना: अल इमेज टर्की इब्न अब्दुल इब्न मुहम्मद, विज्ञापन दिराह रियाद 12652, सउदी अरब
खुल्ला समय: शनि-9: 00-12: 00 र 16: 00-21: 00
सबै भन्दा सानो र एकै समयमा एक अरब प्रायद्वीप - सऊदी अरबका ठूला देशहरू - स्थापनाको एक अनोखी इतिहास छ। यो उद्देश्य एक संग्रहालय द्वारा सेवा गरिन्छ जुन दुश्मन आक्रमणकारियों द्वारा रियाद शहर को रक्षा को एक किला को प्रयोग गरे।
सबै भन्दा सानो र एकै समयमा एक अरब प्रायद्वीप - सऊदी अरबका ठूला देशहरू - स्थापनाको एक अनोखी इतिहास छ। यो उद्देश्य एक संग्रहालय द्वारा सेवा गरिन्छ जुन दुश्मन आक्रमणकारियों द्वारा रियाद शहर को रक्षा को एक किला को प्रयोग गरे। Masmak कैसल, जो केहि 100 वर्ष अघि यसको उद्देश्य उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिएको थियो, अब एक स्वतन्त्र अरब राज्यको गठनको इतिहासमा इच्छुक पर्यटकहरूलाई ढोका खोल्दछ।
गत शताब्दीदेखि 1865 मा स्थापित Masmak युरोपेली मानदण्डको रूपमा शायद नै पुरातन रूपमा मानिन्छ। तर सऊदी अरबका लागि 1932 मा आधिकारिक रूपमा राज्यद्वारा पहिचान गरिएको थियो, मसाक एक वास्तविक ऐतिहासिक मूल्य हो। 1 992मा, उहाँ भाइबहिनी अब्दुल अजिर र मुहम्मद बिन अब्दुरहमानले कब्जा गरिसकेका थिए, पछि देशले विकासमा नयाँ मोड पायो।
संग्रहालयमा कति रोचक छ?
महल मा ध्यान आकर्षित गर्न पहिलो कुरा Masmak - यसको वास्तुकला। इमारतमा शक्तिशाली उच्च पर्खालहरू छन्, हल्का ढुङ्गाको बाहिर राखिएको, र संकुचित विन्डोहरू। यो आवश्यक थियो कि उनीहरु को माध्यम ले गोले को मार को संभावना को कम गर्न को लागी। सबै ठाउँमा मध्ययुगीय किरणिकरण वास्तुकला को डिब्बा पत्ता लगाउन सकिन्छ। किला एक नियमित quadrangular आकार छ, पर्खाल तीव्र दाँत संग मुकुट गरिन्छ, र कोने मा गोल टावरहरू छन्।
अब Masmak किले भित्र एक संग्रहालय छ कि 1 999 मा खोलिएको निर्णय हो। यसको उद्घाटन पहिलो राजा र सऊदी अरब अब्दुल-अजईको संस्थापकको राजनीतिक गतिविधिको प्रमाण हो। संग्रहालय को पर्खालहरु लाई अन्तरक्रियात्मक स्क्रिनहरु संग राज्य को इतिहास देखि तस्वीरहरु लाई सजाइयो। साथै, तपाईं देशभक्त भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो पूर्व स्थानहरूमा बाहिर विभिन्न रक्षात्मक हतियारहरू छन्।
संग्रहालयका धेरै बासिन्दाहरू यसको मूल रूपमा तथाकथित "सोफे" - स्थानीय मध्यकालीन होटलमा पुनर्स्थापित गर्न सफल भयो। यसमा सानो नक्कली नक्कली सजावट भएको सानो पेटोयो छ, जसमा6कोठाहरु को मुख्य कोठा बाट नेतृत्व गरिन्छ।
Masmak संग्रहालय कसरी प्राप्त गर्ने?
आधुनिक रियाद क्षेत्र मा एक प्राचीन किला छ। शहर सेन्टर बाट, किंग फफर्ड Rd वा सडक नम्बर 65 को प्रयोग गरी कार द्वारा प्राप्त गर्न सजिलो छ।
हथियार संग्रहालय (शारजाह)
बाइबलीय देशहरूको संग्रहालय
शारजाह मा होटल
शेख जेड राजमार्ग
इनडोर पौधहरुको लागि Phytoverm
इन्स्ट्ररी Berdz plasticine देखि
जीवनमा आवाज कसरी परिवर्तन गर्ने?
कम्बोडिया, नोम पेन्ह - होटल
अवधारणाको लागि उत्तम हुन्छ
आफ्नो हातले मोतीहरू
हर्प जोस्टर - वयस्कों मा लक्षण र उपचार
प्रिंस हैरी र मेगन मार्कल को विवाह को मुख्य नायक कौन हो?
बैक्टीरियल vaginosis - उपचार
चिनियाँ मा चिकन
के यो देवताबाहेक कुनै बच्चा बप्तिस्मा गर्न सम्भव छ?
क्लरीटिन - प्रयोगको लागि संकेत
काठबाट बनेको सुन्दर बाड़
प्राकृतिक रतन देखि फर्नीचर - आधुनिक इंटीरियर मा उपयोग को सुविधाहरु
वालपेपर कसरी प्यान्ट गर्ने हो?
जुनून बेरीज - औषधीय गुण र विनाशकारी
धारीदार पतलूनलाई के गर्ने?